Tafakatra 1071 ireo tsaboina raha 844 izany ny 1 septambra - ewa.mg
News - Tafakatra 1071 ireo tsaboina raha 844 izany ny 1 septambra
Mbola mampanahy tanteraka. Niakatra
ho 1071 ny isan’ireo mbola tsaboina sy arahi-maso ny fahasalamany,
araka ny tatitry ny CCO, omaly. Miisa 844 anefa izany ny 1
septambra teo. Izany hoe, miisa 227 ireo marary vaovao amin’ity
Covid-19 ity tao anatin’ny sivy andro. Mitsinjara ho 26 isan’andro
eo ho eo izany ireo miditra hopitaly amin’ny ankapobeny.
Manaporofo izany koa ny tranga
vaovao miisa 85 tamin’ny fitiliana vita miisa 626. Mifanahantsahana
amin’ny isan’ireo nifindran’ny valanaretina miisa 22 eto Analamanga
ny tranga vaovao miisa 16 any Alaotra Mangoro sy ny any Diana,
miisa 15, ary ny any Menabe, ahitana 14. Manampy ireo ny any
Vatovavy Fitovinany sy any Sofia, miisa dimy avy, raha efatra ny
any Sava. Iray avy kosa ireo nifindran’ny valanaretina any Melaky
sy any Anosy ary any Matsiatra Ambony. Manodidina ny 13% ny
tahan’ny fiabon’ny fitiliana.
Ankoatra izany, tsy nihetsika ny
isan’ireo marary mafy fa nijanona ho 53 ihany. Tahaka izany ireo
lavon’ny Covid-19, tsy nisy ny maty ka mbola 206 izy ireo
hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty.
Na izany aza anefa, miisa 24 ireo
sitrana ka tafakatra 14 243 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho
amin’ny fahasitranana tamin’ireo marary miisa 15 520.
L’article Tafakatra 1071 ireo tsaboina raha 844 izany ny 1 septambra a été récupéré chez Newsmada.
« Sit-in », teny Anosy: nitaky ny hampiharana ny lalàna ireo mpisolovava
Tsy nipetra-potsiny. Nidina an-dalambe, nanao hetsika teny amin’ny manodidina ny fitsarana Anosy ny eo anivon’ny Holafitry ny mpisolovava, omaly. Tsy hanaiky izy ireo raha ho vitavita mora ilay vono sy daroka nihatra tamin’ny naman’izy ireo tetsy Antanimena. Mivonona ny handeha hatramin’ny farany ary tsy hanaiky. “Fanehoana firaisankina amin’ny namanay niharan’ny herisetra teny Antanimena ny marainan’ny asabotsy teo izao hetsika izao. Toherinay amin’ny herinay rehetra koa ny tranga tahaka ireny ary takinay tanteraka ny hampiharana ny lalàna, amin’ny maha tany tan-dalàna ny firenena”, hoy ny fanambaran’ny teo anivon’ny biraon’ny Holafitry ny mpisolovava. Nialohavan’ny diabe manodidina ny teny amin’ny lapan’ny fitsarana Anosy izany hetsika izany. Nambaran’izy ireo fa efa nisy ny fitoriana napetraky ny Holafitry ny mpisolovava, ny faran’ny herinandro teo, manoloana iny herisetra iny. Fizahozahoana sy fanamparam-pahefana… Samy nanameloka ny tranga herisetra niseho iny avokoa, na ny polisim-pirenena, na ny mpiaro ny zon’olombelona sy ny teny anivon’ny primatiora. Marobe ny fihetsika na tranga mitovy amin’ireny any amin’ny tany lavitra andriana rehetra any, saingy lafitsaran’ny tambajotran-tserasera ny nielezan’ny vaovao haingana, ho an’ny aty an-tanan-dehibe. Mainka moa fa any ambanivohitra any. Fomba ratsy fanaon’ny sasany ny fizahozahoana sy ny fanamparam-pahefana ary koa ny tsy refesi-mandidy, tahaka ireny, na inona na inona zava-misy sy nitranga. Mety ho tampohin’ny fahefana kely ka manao ny tsy fanao sy tsy mandinika. Tompon’ny lalàna sy manao didy jadona Eo koa ny filazana ho mahalala olona mpitondra sy mpitantana izatsy na izaroa na akaiky ny tena ka zary lasa tompon’ny lalàna sy manao didy jadona. Mivoaka avokoa ny teny feno fiavonavonana sy ny fampihorohoroana. Eo koa ny tsindry aloka mbola miampy ny fampiasana fitaovana aza izany, toy ny basy ohatra, tahaka ity niseho teny Antanimena ity. Misy fetrany sy farany ihany anefa izany ary tsy dondrona avokoa ny Malagasy rehetra ka hanaiky hotsindrina hatrany isaky ny mihetsika. Tokony hanova fomba fisainana ny tsirairay. Ifandimbiasana ny fitantanana sy ny fahefana ka tsy tokony hanaovana tsinontsinona ny hafa izany na hampiharana tsindrihazolena. Araka izany, hampiharo ny lalàna, araka ny fitakian’ny mpisolovava … Andrasana ny ho tohiny. Randria L’article « Sit-in », teny Anosy: nitaky ny hampiharana ny lalàna ireo mpisolovava a été récupéré chez Newsmada.
Famosaviana :: Zazakely roa volana sy tapany nofantsihina ny lohany
Miady amin’ny fahafatesana hatramin’ny omaly ny zazakely iray naratra mafy rehefa nisy namantsika teo amin’ny lohany, tany Bemahatazana-Tsiroanomandidy, tamin’ny 15 jolay lasa teo, tokony ho tamin’ny 4 ora hariva. Tsaboina ao amin’ny hopitaly any Tsiroanomandidy ilay zazakely. Famosaviana no anton’ity zava-doza ity, araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana. “Resin-tory tany amin’ny rihana voalohan’ny tranon’izy ireo ny renin’ity zazakely tamin’io fotoana io. Tao ambany rihana kosa ilay zaza. Tsy fantatra izay nahavanon-doza fa ny zazakely efa nihiakiaka nitomany no nanaitra ny reniny. Rehefa nojereny tao ambany rihana dia hita fa voafantsika ny lohan’ilay zaza, sady nahitana ody gasy. Taitra izy nahita izany ka nitondra ny zaza tany amin’ny toeram-pitsaboana haingana aloha. Tsy vita tao Bemahatazana anefa ny raharaha. Teo no ho eo ihany dia nentina niakatra tao Tsiroanomandidy”, hoy hatrany ny loharanom-baovao. Eo am-pitadiavana an’izay mety ho nahavanona an’izao loza izao ireo zandary miasa any Bemahatazana. Araka ny fitantaran’ireo mponina any an-toerana dia famosaviana no anton’io tranga io. L’article Famosaviana :: Zazakely roa volana sy tapany nofantsihina ny lohany est apparu en premier sur AoRaha.
Ho maina ny andro: ho betsaka ny zavona
Hanjaka eto Madagasikara mandritra ity herinandro ity ny tsioka varatraza malefaka sy maina. Vokatr’izany, ho maina ny andro amin’ny ankapobeny saika manerana ny Nosy ary hibaliaka ny masoandro. Etsy andanin’izany anefa, hisitraka orana malefaka ihany ny any avaratra atsinanana : faritra Analanjirofo sy Sava. Hisy zavona ny vao maraina ho an’ny ny faritry ny afovoan-tany sy ny tapany atsimon’ny Nosy, ato anatin’ny roa andro ho avy.Ho an’ny maripana, tsy ahitana fiovana loatra izany fa rahampitso no hisy fidinany ny maripana ambony amin’ny ilany Atsimon’i Nosy. Ny maraina manodidina ny 05- 21°C ny maripana ary ny tolakandro kosa tafakatra 20- 33°C. Hidina hatrany amin’ny 4°C ny maripana ambany indrindra ho an’ny faritra Vakinankaratra ary ho tafakatra 34°C kosa any Maevatanàna, Antsohihy ary Morondava. Mbola ao anatin’ny vanim-potoana ririnina ihany isika hatramin’izao. Vokatry ny fiovan’ny toetry ny andro matetika, mbola betsaka ny olona voan’ny gripa sy ny kohoka miharo sery. Torohevitra nomen’ny mpitsabo ny fihinanana sakafo manome otrikaina toy ny voankazo miloko volomboasary. Tsara hatrany koa ny mivatsy akanjo mafana hiarovana amin’ny fidinany maripana tampoka, indrindra ny maraina sy ny takariva.Ho an’ny telo volana manaraka, aogositra septambra sy oktobra, hihamalefaka ny tranga El Nino izay mifandraika amin’ny velaran’ny ranomasimbe pasifika ekatorialy, araka ny vinavina avy amin’ny foibe fitiliana ny toetrandro maneran-tany.Vonjy L’article Ho maina ny andro: ho betsaka ny zavona a été récupéré chez Newsmada.
Baolina lavalava :: Afaka manomana ara-batana an’ireo mpilalao ihany koa ireo mpitsara
Miezaka hampivoatra hatrany an’ireo mpilalao baolina lavalava ny avy ao amin’ny Malagasy Rugby. Nanatante­raka fiofanana indray izy ireo, tamin’ny sabotsy lasa teo, teny amin’ny Kianjan’i Makis Andohantapenaka. Miisa enina amby telopolo ireo mpandray anjara nandritra ny iray andro, izay nahitana mpitsara, satria fantatra fa afaka manomana ara-batana ny mpilalao ihany koa izy ireo. “Fepetra iray ihany no notakiana. Tsy maintsy efa nandray anjara tamin’ny fitsapana tany amin’ny tranonkalan’ny Federasiona maneran-tany amin’ny baolina lavalava avokoa vao miatrika ny fiofanana. Tsy misy fanavahana kosa na iza na iza. Afaka manomana ara-batana ihany koa mantsy, na mpitsara, na mpianatra any amin’ny akamedia, na ireo anaty klioba”, arakya ny fanazavan-dRandrianoroso Antsoniandro, tale teknika nasionalin’ny Malagasy Rugby. Hanomboka amin’ny 3 aogositra ho avy izao kosa ny lalao sivana hiakarana amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara na ny “Top 20”. Ny toerana hanaovana izany kosa no mbola tsy voafaritra hatreto. Sendra R. L’article Baolina lavalava :: Afaka manomana ara-batana an’ireo mpilalao ihany koa ireo mpitsara est apparu en premier sur AoRaha.
Brentch: raikitra ny « Izao rehetra izao III »
Tafiditra ao anatin’ny adiany faha-3 ny « Izao rehetra izao ». Antsa tononkalo sy hira ary fampahafantarana ireo hetsika hotontosaina ao anatin’ny fanamarihan’i Brentch Mbolamasoandro ny faha-20 taona nanoratany. « Izao rehetra izao III » hotontosaina ao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy (Efitrano Rado), ny alakamisy 4 jolay izao, manomboka amin’ny 10 ora maraina. Ity rahateo no fanokafana amin’ny fomba ofisialy ireo fandaharam-potoana rehetra hotontosaina mandritra ny fankalazana. Hanafana ny sehatra eny an-toerana i Kôlibera sy ny tarika Tafasiry Kolokanto (ENS) ary i Simon Randria.Fantatra fa ho maro ny hetsika hotanterahin’ity mpanoratra ity ao anatin’ny taona iray hanamarihany ny faha-20 taona nanoratany. Tafiditra ao anatin’izany ny fampirantina ireo sanganasany tao anatin’izay 20 taona izay, ny rindrankira an-tsehatra, sns. Marihina fa ankoatra ny maha mpanoratra azy, mpanakanto eo amin’ny sehatry ny asa famoronana (akanjo, haingo, ravaka…) ihany koa i Brentch Mbolamasoandro.HaRy RazafindrakotoL’article Brentch: raikitra ny « Izao rehetra izao III » a été récupéré chez Newsmada.
Kaomandin’ny ZRPS Alpha: hamaky kizo roa fieren’ny dahalo ny Tafika
Ny ZRPS Alpha na “faritra ambanivohitra laharam-pahamehana amin’ny fampandriana fahalemana” Alpha dia miandraikitra ny faritra atsimo toa an’i Matsiatra ambony, Atsimo atsinanana, Anosy, Ihorombe, Androy ary Atsimo Andrefana izay manana “bataillon telo”. Laharam-pahamehana ho an’ity andian-tafika ity ny famakiana ireo kizo tsy mbola nidirana mpitandro filaminana efa ampolon-taona ary nanaovana ezaka manokana ao amin’ny distrikan’Ihorombe dia ny ao Sakoazato izay nahazoana omby 300 mahery, saingy tsy tratra ny lehiben’ny dahalo atao hoe Jaonary ary hanaovana hazalambo hatramin’izao, araka ny fanazavan’ny kaomandin’ny ZRPS, ny Jly Andriamasimanana William Michel nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly teny Ampahibe. Notsipihiny manokana fa misy taratasy ara-dalàna avokoa ireo iraka ataon’izy ireo amin’ny famakiana kizo fa tsy araka ny fanamarihana aparitaky ny olona sasany. Ny rafitra apetraka amin’ny fampandriana fahalemana dia mipetraka fa ny olona no miova ary ny ezaka amin’ny famongorana izany dia mitohy hatrany. Hovakina tsy ho ela ireo kizo roa ireo ary efa maty paika ny paikady hanaovana izany, hoy izy.Jean Claude L’article Kaomandin’ny ZRPS Alpha: hamaky kizo roa fieren’ny dahalo ny Tafika a été récupéré chez Newsmada.
Tsindron’antsy noho noho ny hasarotam-piaro :: Lehilahy maty novonoin’ny tovovavy, sakaizany
Nandeha namangy ny tovovavy, olon-tiany, tany Ambilobe no anton-dian’ity mpianatra iray ao amin’ny lisea any Antsiranana, tamin’ny sabotsy lasa teo, kinanjo fahafatesana no niafaran’ny diany. Voalaza fa notsatohan’io olon-tiany io tamin’ny antsy teo amin’ny tendany itsy mpianatra itsy. Namoy ny ainy ilay tovolahy na dia noezahina novonjena tany amin’ny hopitaly aza. “Nivantana tany amin’ny fianakaviany monina eny Manongarivo ilay tovolahy rehefa sendra mandalo eto Ambilobe. Tsy fantatra izay tena zava-nisy fa araka ny resaka fohy nataonay tamin’ilay vehivavy voatondro ho tompon’antoka tamin’ny famonoana dia tezitra noho ny fampirafesana nataon’io tovolahy io taminy izy. Izany no nanosika azy hanindrona antsy an’ity sakaizany”, araka ny tatitra azo avy amin’ny loharanom-baovaon’ny Polisim-pirenena any Ambilobe. Ora iray taorian’ny nisian’ izao tranga mampalahelo izao no nitolo-batana tany amin’ny biraon’ny kaomisarian’ny polisy iry tovovavy. “Hisorohana ny mety hisian’ny fitsaram-bahoaka kosa dia nalefanay avy hatrany any Antsiranana ilay vehivavy. Any izy no hatao famotorana sy hatolotra ny Fitsarana”, hoy hatrany ireo mpitandro filaminana any Ambilobe. Mpianatra ao amin’ny kolejy iray ao Ambilobe itsy tovovavy, vao 23 taona, itsy. Efa eo am-pelantanan’ny fianakaviany ny vatana mangatsiakan’ilay mpianatry ny lisea any Antsiranana izay namoy ny ainy. Mbola nataon’ny mpitsabo fitsirihana ny razana alohan’ izany. L’article Tsindron’antsy noho noho ny hasarotam-piaro :: Lehilahy maty novonoin’ny tovovavy, sakaizany est apparu en premier sur AoRaha.